स्मार्टफोन फास्ट बनाउने ६ तरिका जानि राखाैं – Information
स्मार्टफोन फास्ट बनाउने ६ तरिका जानि राखाैं
आफ्नो स्मार्टफोन तथा ट्याबलेटको गति धीमा भयो भयो जो कोहीलाई दिक्क लाग्छ । स्मार्टफोनमा स्क्रिन दबाउने बित्तिकै चाहेको चिज गर्न वा देख्न पाइएन भने स्मार्टफोन नै फ्याँकिदिउँ की जस्तो लाग्छ । स्मार्टफोनको गति बढाउनका लागि अर्थात् स्मार्ट बनाउनका लागि यसलाई भाइरसमुक्त बनाउने, बेलाबेलामा स्क्यान तथा फम्र्याट गर्ने लगायतका काम गरिरहेकै हुन्छौँ ।
बुझ्नै पर्ने कुरा के हो भने स्मार्टफोन तथा ट्याब्लेटलाई स्मार्ट बनाइराख्नका लागि त्यसमा डाटा स्टोरेजको लागि पर्याप्त ठाउँ बाँकी रहनुपर्छ । स्टोरेज क्षमता पूर्ण हुँदैजाँदा स्मार्टफोनको गति कम हुँदै जान्छ । त्यसैले स्मार्टफोन स्लो भयोभने निम्न उपाय अपनाउनु हितकर हुन्छ-
१. अनावश्यक एप डिलिट गर्नुस्- तपाइँ जुन एप प्रयोग गर्नुहुन्न वा निकै कम प्रयोग गर्नुहुन्छ र खासै आवश्यक पनि छैन, त्यसलाई हटाइदिनुहोस् । प्रायः प्रयोग गर्नु नपर्ने एपहरु स्मार्टफोनबाट हटाइदिएकै राम्रो, किनकी चाहिएको बेलामा त्यस्ता एपलाई पुनः इन्स्टल गर्न सकिन्छ । स्मार्टफोन कम्पनीहरुले आफ्नो स्मार्टफोनमा कतिपय अनावश्यक इनबिल्ड एपहरु पनि राखेका हुन्छन्, त्यसलाई प्रयोगकर्ताले छानेर हटाइदिनुपर्छ । यसले स्मार्टफोनको स्टोरेज क्यापासिटी बढाइदिन्छ ।
२. ह्वाट्सएपका फोटोहरु डिलिट गर्नुहोस्- पुराना तथा प्रयोजन सकिएका तस्वीर तथा भिडियोहरुलाई स्मार्टफोनबाट सधै डिलिट गरिरहनु पर्छ । खासगरी ह्वाट्सएप लगायतका च्याट एपहरुमार्फत प्राप्त हुने फोटो तथा भिडियोहरु एकपटक हेरिसकेपछि काममा आउँदैनन् । यस्ता फोटो तथा भिडियोले स्मार्टफोनको मेमोरीमा धेरै ठाउँ ओगटेका हुन्छन् । त्यसैले त्यस्ता काम नलाग्ने फोटो र भिडियोलाई डिलिट गर्नुस् ।
३. गीतहरु म्युजिक स्टि्रमिङमा राख्नुस्- गीतहरुलाई म्युजिक स्टि्रमिङ एपमै राख्नुहोस् ।
स्मार्टफोनमा यस्ता धेरै एप हुन्छन् जहाँ तपाइँले आफुलाई मन पर्ने गीतहरुको प्ले लिष्ट बनाउन सक्नुहुन्छ । फोनको मेमोरीमा ठूला ठूला म्युजिक फाइल राख्नु उपयुक्त हुँदैन ।
४. भिडियो संग्रहित गर्नैपर्ने हो ?- भिडियो फाइलले स्मार्टफोनको मेमोरीमा धेरै स्पेस लिन्छ । त्यसैले भिडियो फाइलहरु स्मार्टफोनमा सेभ गर्दा त्यसले स्मार्टफोनको स्पेस घटाइदिन्छ र धीमा पनि बनाइदिन्छ । धेरै जरुरी तथा अत्यावश्यक भिडियो फाइलहरु मात्र स्मार्टफोनमा सेभ गर्नुपर्छ । अनावश्यक भिडियोहरु सेभ गर्नुहुँदैन, डिलिट गरिहाल्नुपर्छ ।
५. डाउनलोड डाइरेक्टरी, क्याश चेक गर्नुहोस्- आफ्नो स्मार्टफोनको डाउनलोड डाइरेक्टरी तथा क्याश मेमोरी समय समयमा चेक गरिरहनुपर्छ । डाइरेक्टरीले डाउनलोड भएको फाइलको साइज बताइदिन्छ । यसबाट ठूलो फाइल पहिले डिलिट गरेर आवश्यक स्पेस तयार पार्न सकिन्छ । यस्ता कतिपय एप पनि छन् जसको मद्धतबाट तपाइँले आफ्नो फोनको सफाइ गर्न सक्नुहुन्छ । जस्तै एन्ड्रोइडका लागि क्लिन मास्टर र एप्पलका लागि ब्याट्री डाक्टर ।
६. होम स्क्रिन फ्रि गर्नुहोस्- होम स्क्रिनमा कम भन्दा कम एपहरु राख्नुहोस् । मोबाइल फोनको सफाइ गर्ने एपहरु होम स्क्रिनमा राख्दा राम्रो हुन्छ ।
यदि यी उपाय अपनाउने हो भने तपाइँको मोबाइल फोन साँच्चीकै स्मार्ट बन्नेछ र नयाँ चिज डाउनलोड अर्थात् अपलोड गर्दा ह्यांग हुनेछैन ।-बीबीसी, अनलाइन खवर
Previous निन्द्रा लाग्दैन भने यसो गर्नुहोस
Next सन् २०३९ भित्रै मंगल ग्रहमा मानिस पठाउने तयारी
बिपन्न बिरामीलाई सहुलियत उपचार : कुन रोगको लागि कुन अस्पताल ?
ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा